Home Wararka Siyaasiyiinta Waqooyi oo ku eedeeyay Rooble in uu ka baxay dhexdhexaadnimada
[AKHRISO] Siyaasiyiinta Waqooyi oo ku eedeeyay Rooble in uu ka baxay dhexdhexaadnimada
Siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada waqooyiga ee dowlada federaalka, oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa eedeyn culus u jeediyey ra’iisul wasaare Maxamed Rooble.
Rooble ayay xuseen inuu ka xaglinayo xalinta khilaafaadka doorashada kadib markii “uu diiday inuu ka saaro guddiga maamuleysa codbixinta kuraasta Somaliland ee kamidka ah shaqalaha rayidka ah iyo hay’addaha amniga”.
Eedeyntan ayaa kusoo aadeysa xilli todobaadkii hore Roobla uu Rooble caasimada Muqdisho kula shiray wakiilada Somaliland ee dowladda federaalka kulankaas oo natiijadda kasoo baxdey aan si rasmi ah loosoo bandhigin.
Balse, qaar kamid ah xubnaha ka qeybgalay ayaa ka dhawaajiyey in wasiirka koowaad ee federaalka uu u muujiyey in uusan diyaar u ahayn xal u helida tabashooyinka ay ka qabaan xubnaha kamidka ah guddiga doorashada.
Xubnaha cabashadda ka jirto ayaa waxaa kamid ah xubin ay Villa Soomaaliya u dooneyso guddoonka guddiga kaasoo garabka taageersan ra’iisul wasaare ku xigeenka ay Muqdisho ugu doorteen guddoomiyaha guddigaan.
Doorashaddaas ayaa sababtay in garabka taageersan Cabdi Xaashi ay dhankooda caasimadda ku doortaan guddoon. Tani waxay mar kale kicisay khilaafka guddiyada doorashada gobolada waqooyi oo horey caqabad u ahayd.
Dhexdhexaadnimo la’aanta lagu eedeynayo xafiiska ra’iisul wasaaraha ayaa haddii la xaqiijiyo waxay noqon kartaa dharbaaxo kale iyaddoo ay dhalineyso su’aallo ku geedaaman qaabka loogu aamini karo coddeynta waddanka.
Qoraalka siyaasiyiinta gobolada
Previous article[Daawo] Farmajo & Rooble oo dagaal ugu jira in Beesha Habar Gidir xubin ku yeelato Aqalka Sare. Sababta?
Next articleDagaal markale ka qarxay degaano ka tirsan Gobolka Mudug
Muxuu ahaa nuxurkii shirkii Jaraa’id ee uu maanta qabtay Ugaas Xasan...